tsy misy famatsiam-bola famatsiam-bola hafa faritra voafidy
2 tetikasa mitohy:
11 tetikasa mitohy:
3 tetikasa mitohy:
6 tetikasa mitohy:
17 tetikasa mitohy:
1 tetikasa mitohy:
8 tetikasa mitohy:
12 tetikasa mitohy:
5 tetikasa mitohy:
4 tetikasa mitohy:
Mandray anjara amin’ny fanatanterahana ny programa nasionaly ho an’ny fitantanana maharitra ny harena voajanahary sy ny fiarovana ny tontolo iainana.
Ireo vokendrin’ny tetikasa
Mamaly ireo lohahevitra 4 izay volaza ao amin’ny drafitra stratejika ny Tany Meva ny tetikasa tohanana, dia ny:
Fanatsarana ny farimpiainanan’ny mponina
Fiarovana ny totonlo iainana
Fanalefahana sy fampifanarahana ny fiatraika’ny fiovaovan’ny toe-trandro
Famatsiana manokana avy amin’ny Tany Meva
Fambolen-kazo, angovo (Famatsian-jiro ny tontolo ambbanivohitra amin’ny alalan’ny fametrahana tetikasa famatsiana jiro avy amin’ny alalan’ny rano, masoandro, fampiroboroboana ny fantana nohatsaraina sy ny solika maitso), ny fanabeazana momban’ny tontolo iainana, fiarovana ny tontolo iainana sy ireo miaina ao anatiny, fanarenana ny ala voajanahary sy ala honko, fambolem-bary, hetsika loharanom-bola, fanaganana foto-drafitrasa (sekoly, làlana, lakandrano, tohodrano, sns ..).
Mombamomba ny fandaharan’asa
Natsangana tamin’ny taona 2000, ny Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) dia te handray ny fanamby amin’ny fitehirizana azy amin’ny fanomezana ireo mpikambana ao amin’ny fiarahamonim-pirenena (ONG, sehatra tsy miankina, andrim-pampianarana) avy amin’ny firenena an-dalam-pandrosoana sy toekarena amin’ny tetezamita, ny fomba hiarovana ny hotropotika biodiversity, ny tontolo iainana manankarena indrindra ary faritra marefo indrindra eto an-tany.
Ny famatsiam-bola dia avy amin’ny Agence française de développement, Conservation International, Union européenne, Fonds pour l’environnement mondial, Gouvernement japonais, Fondation Mac Arthur ary ny Banque mondiale.
Toerana 9 mafapana maneran-tany no iantseheran’ny CEPF, ao anatin’izany ny MADIO izay ahitana an’i Madagasikara, Maurice, Seychelles ary Comores. Ireo faritra ireo dia misy toerana 79 mandannja hoan’ny harena voajanahary ary izy io dia tohanan’ny Fondation Helmsley ihany koa.
Tamin’ny taona 2015 dia lasa mpitantana ny vola ao amin’ny CEPF ny Fondation Tany Meva. Ny ekipa « The Regional Implementation Team » (RIT) dia ivondronan’ny mpitarika iray, mpitantana tetikasa telo, mpitantana roa ao amin’ireo nosy manodidina, mpikirakira ara-bola sy fitantanana ary mpamily. Ity ekipa ity dia eo ambany eo fitatanana mpanatanteraka ao amin’ny Tany Meva.
Inona marina izany ?
Niatomboka tamin’ny taona 2011, ny tetikasa “Pico Hydro Electricity for Rural Development” na PHEDER dia mandray anjara amin’ny fanatanterahana ny fandaharan’asa nasionaly momba ny famatsian-jiro indrindra fa ny fanomezan-danja ny famatsian-jiro aminy alalan’ny rian-drano na “Centrale pico” eny amin’ny toerana ambanivohitra ary koa mampiroborobo ny fampandorosoana amin’ny faritra Analamanga sy Amoron’i Mania.
Distrika enina ao amin’ny Distrika roa (Anjozorobe sy Ambositra) no mahazo tombony amin’ity tetikasa ity, dia ny Amboasary, Amparantajona, Ambatomanoina, Kianjandrakefina, Ambohimitombo II ary Andina
Ny famatsiam-bola dia manohana hetsika, tetikasa, fandaharan’asa mifanaraka amin’ny drafitra stratejika vaovao an’i Tany Meva, mifantoka amin’ny fampiroboroboana ny fampandrosoana maharitra:
fikajiana maharitra ny tontolo iainana, farihy, tontolo ianaina any amoron-dranomasina sy an-dranomasina ary izay mifanandrify aminy;
fanatsarana ny fari-piainan’ny fokonolona,
ny fandraisana anjara amin’ny fanalefahana ny vokatry ny fiovan’ny toetr’andro.
Ireto manaraka ireto no voasahan’ny famtsiam-bola:
Harena voajanaharin’ Andravitsiazo
Faritra arovana ao Tsinjoriake
Nisy ny fanitsiana tamin’ny taona 2018 amin’ny fanitarana ny fotoana fampiasana an’io famatsiam-bola izay mitetina 143 743 USD io ka nitohy hatramin’ny 30 jona 2019 izany.
Ao amin’ny avaratra atsinanan’i Madagasikara no misy an’i Makira, mirefy 37470 ha eo ho eo ary misy mponina 90,000. Izy io no ala mando matevina indrindra izay mbola tsy voakitika eto Madagasikara. Makira dia ionenanan’ny karazan-gidro miisa 17, karazan-javamaniry 300 ka ny 50 amin’izany dia « palmiers »; izany dia manorina fialokalofana tsara indrindra ho an’ny karazam-biby marobe ao anatin’izany ny fosa sy ny voromahery.
Voarahona ny toeram-ponenena sy ny harena voajanahary ary koa ny fahafahan’ilay toerana mamokatra entona karibaona. Ny sehatry ny fandraharahana Karibaonaa (REDD+) dia nahafantarana fa ny karibaona ao aminy dia loharano’ny famatsiam-bola maharitra hoan’ity valan-javaboary ity.
Nisy ny tetik’asa fampandrosoana momba ny fiaraha-monina, ao anatin’izany ny fananganana sekoly roa notokanana tamin’ny 2018 (Ambalamahogo sy Ankijanibe). Tany Meva koa dia nanohana ara-bola ny sehatra sy ny federasiona ny vondron’olona ifotony (COBA).
Noho ny zava-boajanahary tsy manam-paharoa sy ny fitehirizam-piainana avo lenta, dia nosokajiana zaridaina voajanahary io tamin’ny taona 2012. Na eo aza ny toeran’ny fiarovana azo antoka dia mbola eo ambany fanerena (zahana, manapaka, manararaotra ny fitrandrahana ny hazo sy ny harena ankibon’ny tany, ny fihazana).
Mandra-pahatongan’ny taona 2018, Fondation Tany Meva dia nahavita ny tahirim-bolan’ny vondron-karotram-piarahamonina Makira (FCCM) natsangana 50% ny vola azon’ny karbonina novokarina. Araka ny lazain’ny anarany dia ny FCCM dia natao ho fampandrosoana ny vondrom-piarahamonina mifanakaiky amin’i Makira.
Notanterahina ny tetik’asa fampandrosoana momba ny fiaraha-monina, ao anatin’izany ny fananganana sekoly roa notokanana tamin’ny 2018 (Ambalamahogo sy Ankijanibe). Tany Meva koa dia nanohana ara-bola ny sehatra sy ny federasiona ny vondron’olona ifotony (COBA).
Eo ambany fanaraha-mason’ny minisiteran’ny tontolo iainana, i Makira dia iaraha-miasa eo an-daniny, ny Wildlife Conservation Society (WCS), ny tompon’andraikitra mpitantana, ary koa ny fokonolona, ny mpitantana ny loharanom-baovao azo havaozina amin’ny faritra arovna.
Liste projets appuyés 2012
Liste projets appuyés 2013
Liste projets appuyés 2014
Liste projets appuyés 2015